Madaxweynaha Soomaaliya oo Munasabadda 1-da Maajo Hanbalyo u diray Shaqaalaha Soomaaliyeed | SAHAN ONLINE
Madaxweynaha Soomaaliya oo Munasabadda 1-da Maajo Hanbalyo u diray Shaqaalaha Soomaaliyeed
MUQDISHO – Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa hambalyo u diray shaqaalaha Soomaaliyeed maadaama maanta ay ku beegan tahay 1da bisha Maajo taasoo sanad kasta laga xuso caalamka.
Waxaan hambalyo halkan uga dirayaa dhammaan shaqaalaha adduunka, gaar ahaan xoogsatada Soomaaliyeed munaasabadda maalinta shaqaalaha adduunka ee 1da May. Waxaan ku bogaadinayaa dhabar adayga iyo hawlkarnimada aad muujiseen, idinka oo waliba ku shaqeynaya duruufo adag.
Dowladdu waxay ku dadaaleysaa horumarinta xuquuqda shaqaalaha Soomaaliyeed, waxaana haatan ay Xukuumadd Federaalka Soomaaliya gacanta ku haysaa dhameystirka shirciga shaqaalaha oo kala hagaya shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha iyo siyaasadda shaqaaleysiinta.
Sidoo kale, wax Golaha Shacabka horyaalla Sharciga Shaqaalah Rayidka ah oo u dib u habeyn ballaaran lagu sameeyay. Shuruucdaas waxay muhiim u yihiin dhawrista iyo daryeelka xuquuqda shaqaalaha Soomaaliyeed.
Waxaan adkeynayaa ahmiyadda ay shaqaalaha iyo xoogsatada Soomaaliyeed u leeyihiin kobcinta dhaqaalaha dalka, ka qeyb-qaadashada nabadgelyada iyo dadaallada aan ugu jirno dowlad dhisidda Soomaaliya. Waxaan qirayaa in shaqaalaha Soomaaliyeed, oo dhallinyaro u badan, ay ku ammaanan yihiin dawrka ay ka qaadanayaan horumarka dalka.
Waxaan farayaa shirkadaha gaarka loo leeyahay in ay xil iska saaraan daryeelka iyo bad-qabka shaqaalahooda si loo hubiyo in aan la duudsiin xuquuqahooda aasaasiga ah.
Waxaa kale oo muhiim ah in shaqaalaha Soomaaliyeed ay sameystaan iskaashatooyin iyo ururro u taagan difaaca xuquuqda shaqaalaha si looga hortago xadgudub kasta oo kasoo wajihi kara hay’adaha iyo shirkadaha ay ka hawl galaan.